Cat Health And Health Problems | Eyekhala 2022
Ixabisa malini ukuGweba ikati?
Udidi Cat Health And Health Problems
Iindleko kukuqwalaselwa nje omnye xa ucinga ukuba ikati yakho ibhengeziwe. Fumanisa ukuba ungalindela ukuhlawula malini kwaye kutheni iindleko zinokuba phezulu kangaka.
I-Cat Ear Mites vs. I-Wax yeNdlebe-Uwuxelela njani umahluko
Ukuba nekati kuthetha ukuba unakekele iimfuno zabo zokuzilungisa, kubandakanya nokunakekelwa kwendlebe okufanelekileyo. Funda indlela yokuxelela umahluko phakathi kwekati kunye ne-wax yendlebe ukuze ...
Iimpawu zeKati yokufa
Inqanaba lekati lakho, ukuphefumla kunye nobushushu bomzimba kunokunika imikhondo ukuba uyafa. Funda yonke imiqondiso ukuqonda ukuba kwenzeka ntoni.
Unyango olulula lweKhaya kwiZilwanyana zeNdlebe
Ungavumeli izilwanyana zenze ikhaya ezindlebeni zakho. Kwimpawu zokuqala zokucaphuka, landela la manyathelo onyango lwasekhaya ukuzisa isilwanyana sakho ngokukhawuleza.
Ikati Ithatha ixesha elingakanani ukuba neekati?
Ubude bekati yomsebenzi buyahluka. Fumanisa ukuba lide kangakanani ixesha lesigaba sabasebenzi, xa kufuneka ungenelele, kwaye xa ilixesha lokubandakanya ugqirha wezilwanyana.
Izinto ekufuneka ziqwalaselwe ngaphambi kokumisela ikati
Ukumisela umthetho sisihloko esiphikisayo. Fumana ulwazi malunga neenkqubo, iindleko, ixesha lokubuyisela kwimeko yesiqhelo, kunye nokunye ukuthathelwa ingqalelo ukuze wenze ukhetho olunolwazi ngekati yakho.
Ngaba iikati ziyopha xa kushushu?
Ngokungafaniyo neenja ezishushu okanye abantu abanemijikelo yokuya exesheni, iikati azophisi ngexesha le-estrus. Ukuba ubona iimpawu zokopha ngexesha lokushisa kwekati lakho, oku kunokuba ...
Iindlela ezi-7 eziMangalisayo zokuSebenzisa ioyile yeCoconut kwiikati
Kuya kuvela ukuba ioyile yekhokhonathi ilungile kwiikati njengoko injalo nakubantu. Ukusuka kwisithambisi solusu kunyango lwebhola yeenwele, zama ezi zinto zicetyiswayo kusetyenziso lwezilwanyana.
Yintoni Ukufa kweekati?
Akukho kati kufuneka ifelwe lilolo. Ziqhelanise nokuziphatha okuqhelekileyo okufayo ukuze ubekho ukuze uthuthuzele isilwanyana sakho xa kufika ixesha.
I-Telltale Signs i-Old Cat iyafa
Iimpawu zokusondela kokufa ziyahluka kwizifo ezithile. Jonga ngoku ukuba ikati yakho endala inokuba isondele ekufeni.
Ngaba abantu banokufumana iintshulube kwiikati?
Ewe unokufumana iintshulube kwikati. Fumanisa ukuba zeziphi iintlobo zeentshulube ezinokudluliselwa ebantwini, ukuba ungazibona njani iimpawu, kunye nendlela yokuthintela ukuzifumana.
Unyango lwaseKhaya lweCat Colds
Ikati 'ebandayo' eneneni sisifo esiphezulu sokuphefumla. Ezi zifo zihlala zibangelwa yintsholongwane kwaye zingenza ikati yakho ukuba izive imdaka kwaye ilahlekelwe ...
Ukunyamekela iKati eligulayo nelifayo
Umgangatho wobomi kufuneka ukhokele izigqibo zakho xa ukhathalele ikati egulayo efayo. Funda malunga nolawulo lweentlungu kunye nolunye unyango kwezo ntsuku zokugqibela.
7 Iimpawu zeKati yokuGula ekufuneka uyiqaphele
Amakati ziingcali zokufihla iimpawu zokugula. Fumana uluhlu lweempawu eziphambili ekufuneka uzijongile kwaye ufunde xa ilixesha lokuba ubize ugqirha wezilwanyana.
Akukho ndawo ithatha indawo yokhathalelo lwezilwanyana, kodwa olu luhlu lwezifo kunye neempawu ezinxulumene noko kunokukunceda ubone ukuba yintoni engalunganga ngekati yakho. Gcina ngoku.
Izizathu zokuphefumla okunzima kwiikati kunye nendlela yokunceda
Ukuphefumla ngamandla kunokuba luphawu lokugula kakhulu kwiikati. Funda malunga nezizathu ezine eziphambili kunye nendlela abafunyaniswa ngayo kwaye baphathwa ngayo. Ingasindisa ubomi bekati yakho.
Unokwenza ntoni ukuba ikati yakho iphosa iintshulube
Iintshulube ezijikelezayo zihlala kwinxalenye yomjikelo wobomi babo esiswini sekati. Jonga ukuba iintshulube ezisandula ukuphoswa zibukeka njani kwaye ufunde ukuba ungazinyanga njani kwaye uthintele usulelo.
Itshathi yobunzima bekati onokuyisebenzisa ekhaya
Ngaba ikati yakho ityebe kakhulu, ibhitye kakhulu, okanye ilungile? Thelekisa imeko yezilwanyana zasekhaya kule tshathi yobunzima kwaye ufunde ngezinye izixhobo zokuvavanya ubunzima bayo.
Izizathu ezili-12 zokulahleka kweenwele zijikeleze iindlebe zeKati
Ungayivumeli ikati yakho ikhulule inkangeleko yayo entle ngenxa yokulahleka kweenwele ezindlebeni zayo. Fumana olu luhlu lwezizathu ezili-12 kunye nendlela abaphathwa ngayo ngokubanzi ngaphambi kwexesha.
Ithetha ukuthini ikati xa iphosa ulwelo olucacileyo?
Ngelixa ukugabha kuyinto eqhelekileyo kwiikati, ukugabha rhoqo, kunye nohlobo lokugabha, kuhlala kungunobangela wokukhathazeka. Amakati anokuhlanza ulwelo olucacileyo, olunokuthi ...
ungayichaza ikati nangaliphi na ubudala
udanisa njani kwiklabhu yasebusuku
Iimuvi ezingaqhelekanga ezisekwe kwiminyhadala eyinyani
Umbala weenwele olungileyo kwiingcambu ezingwevu
dlala wedwa simahla kwi-intanethi ngokuchasene nekhompyuter